काठमाडौं। विपक्षी दलका नेताहरू बहुमतको संयुक्त सरकार बनाउन आवश्यक समर्थन जुटाउन लागिपरेका छन्। राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएसँगै बहुमत पुर्‍याउने दौडधुप जारी छ। तर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा देखिएको मत विभाजन भने बाधक हुने देखिएको छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि काँग्रेस र माओवादीलाई सिंगो जसपाको साथ आवश्यक छ। तर जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन आफूहरूको सहमति नहुने जनाएको छ। ठाकुरले यही विषय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि जानकारी गराएका छन्। ठाकुरले सोमबार राति नै विज्ञप्ति जारी गरेर आफूहरू देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउने कार्यमा सहभागी नहुने बताएका छन्।
ठाकुर पक्षका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जसपा फुटाउन लागेको आरोप लगाए। ‘अब उपेन्द्र यादवमाथि कारबाही हुन्छ। पार्टी फोडुवामाथि कारबाही गर्छौं। पार्टी फोडुवालाई छोड्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘पार्टी फोड्नलाई एकता गरेको होइन। यो कुरा उपेन्द्रजीले बुझ्न पर्छ। कुनै कार्यकर्ता पार्टी फुटाउन तयार छैन।’
सोही पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागि परेका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले देशले जसपाको राष्ट्रिय भूमिका खोजेकोले नयाँ सरकार गठनका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न आग्रह समेत गरेका छन्। तर, महतो भने जसपा सरकारमा सहभागी नहुने बताउँछन्। जसपामा आफ्नो पक्षको बहुमत रहेको दाबी समेत उनको छ।
‘राष्ट्रपतिजीले दुई वा दुई भन्दा बढी दल बहुमत प्राप्त सदस्यले सरकार बनाउन सक्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा जसपा पार्टी सरकारमा जाने छैन। जसपा सरकारमा जाँदैन भने कुनै व्यक्ति सरकारमा जान्छु भनेर जान पाउँदैन। यहाँ राष्ट्रपतिजीले पार्टी पो बोलाउनुभएको छ।’
तीन दिनभित्र जसपाको औपचारिक विभाजन सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै नेता महतोले उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षरले मात्र सरकार निर्माण नहुने बताए। ‘जसपा एउटा पार्टी हो। कुनै व्यक्ति सरकारमा जान्छु भनेर विज्ञप्ति निकाल्दैमा कसरी सरकार बन्छ ? उपेन्द्र यादव भनेको दल होइन। जसपाको प्रत्येक अध्यक्ष दल हो, म यो गर्छु भन्न पाउँदैन। त्यस्तो हो भने जो प्रथम अध्यक्षले लिने निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक लाइन हुन्छ,’ उनले भने।
वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जुटेका जसपामा हजारौं कार्यकर्ता उपेन्द्र यादवलाई कुर्सी दिलाउन पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार बन्दै नबन्ने महतोले ठोकुवा गरे। ‘जसपा सरकारमा जाँदैन। त्यो पहिल्यैदेखि नै भनेको हो। ७६ को २ अनुसार कसरी सरकार बन्छ हेरौं न ?,’ उनले भने।